We.com.mm - ရည်းစားနဲ့ပြတ်လို့ဆံပင်ဒီဇိုင်းပါ ချိန်းချင်နေသူတွေအတွက် ဆံပင်အတိုဒီဇိုင်း (၄) မျိုး…။
ရည်းစားနဲ့ပြတ်လို့ဆံပင်ဒီဇိုင်းပါ ချိန်းချင်နေသူတွေအတွက် ဆံပင်အတိုဒီဇိုင်း (၄) မျိုး…။
ဆံပင်အတိုဆိုတာလည်း အမြဲခေတ်စားနေတဲ့ Hairstyle တစ်ခုပါ…။ ခေါင်းလျှော်ရတာတွေ၊ ခေါင်းဖီးရတာတွေ၊ ဆံပင်ပုံသွင်းရတာတွေအတွက်လည်း လွယ်ကူတာကြောင့် ဆံပင်အတိုကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်…။ တစ်ချို့မိန်းကလေးတွေကျတော့လည်း ဆံပင်ရှည်လေးတွေထားနေရင်ကနေ ရည်းစားနဲ့ပြတ်တော့ ဆံပင်တိုညှပ်လိုက်တာတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်…။
ဒါကတော့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုပါ…။ ရည်းစားနဲ့ ပြတ်ပြီဆိုရင် ဒီဆံပင်ကိုပဲ ကလိပြီး ဒီဇိုင်းပြောင်းချင်နေပြီ…။ we စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေထဲမှာလည်း ဒီလိုမိန်းကလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ အခုဖော်ပြမယ့် ဆံပင်ဒီဇိုင်းလေးတွေကို ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါနော်…။
၁. မသေသပ်တဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံ ဆံပင်တို…။
ဒီဆံပင်ပုံလေးကတော့ ထက်ထက်မြက်မြက်မိန်းကလေးတွေ၊ စိတ်မြန်တဲ့ကောင်မလေးတွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်…။ ဒီဆံပင်ပုံစံလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူကတော့ ဆံပင်နဲ့ပတ်သတ်လို့ ဘာမှအရေးတဝင် လုပ်နေစရာမလိုပါဘူး…။ ခေါင်းလေးလျှော်ပြီး ဆံပင်လေးခြောက်အောင် သုတ်လိုက်ရင်တောင် ပုံစံမကျတဲ့ဆံပင်စတိုင်ကလည်း သင့်ကိုအရမ်းကို အထာကျတဲ့ကောင်မလေးဖြစ်သွားစေမှာပါ…။ ရည်းစားနဲ့ပြတ်တဲ့သူအတွက်တော့ ဒီဆံပင်ပုံစံလေးက အထာကျကျနဲ့ဆိုတော့ ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်နော်…။
၂. ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားစေမယ့် ဆံပင်တို…။
ဆံပင်အတိုညှပ်ထားပေမယ့်လည်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးပုံစံပေါက်နေစေမယ့် ဆံပင်ဒီဇိုင်းလေးပါ…။ ဆံပင်အတိုဆိုပေမယ့်လည်း နောက်ပိုင်းကပဲ ဆံပင်အတိုလေးဖြစ်နေပြီး ရှေ့ဘက်မှာတော့ဆံပင်အရှည်လေးဖြစ်နေတာကြောင့် ပုံစံလေးကတစ်မျိုးဆန်းပြီး ချစ်စရာကောင်းနေမှာပါ…။ ပြတ်သွားတဲ့ရည်းစားနဲ့ လမ်းမှာပြန်တွေ့ရင်တောင် ချစ်စရာကောင်းလာလွန်းလို့ မမှတ်မိပဲတောင်ဖြစ်နေဦးမယ်နော်…။
၃. အရမ်းလည်းမတိုလွန်းတဲ့ ဆံပင်တို…။
တစ်ချို့တွေကျတော့လည်း ဆံပင်အတိုညှပ်ချင်ပေမယ့်လည်း အရမ်းတိုနေတာမျိုး မညှပ်ချင်တဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်…။ ဒီလို ကောင်မလေးတွေအတွက် အထာလည်းကျတယ်၊ လှလည်းလှပြီး အရမ်းလည်းမတိုလွန်းတဲ့ ဆံပင်ဒီဇိုင်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…။
ဆံပင်အောက်ဖျားတွေကို အချွန်ပုံစံလေးတွေညှပ်မနေပဲ အတိပုံစံလေးတွေညှပ်တာကလည်း တစ်မျိုးလေးဆန်းပါတယ်နော်…။
လွယ်ကူတဲ့ ချစ်စရာ Christmas Card လေးများပြုလုပ်နည်း
၁ရက်အတွင်းအလန်းစားဖက်ရှင်၂စုံကို ဝတ်လိုက်ပြန်တဲ့ Bella Hadid
ပစ္စည်းပြတ်တဲ့ထိရောင်းအားကောင်းခဲ့တဲ့ Gigi Hadid ရဲ့ Jetsetter Palette…
ဆံပင်အရောင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်စမ်းဆိုးကြည့်သင့်တဲ့ အမိုက်စား Hair Color တွေ
၀၀ကစ်ကစ် chubby လေးတွေအတွက် confident အပြည့်နဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိစေမယ့်ဖက်ရှင်များ